Bugote Foto | Nwanyị gba ọtọ - Nmụ nwanyị gba ọtọ - Foto ndị na-amu amu [TOP 10 2021]
Hụ otu esi ebugote foto na vidiyo gị Nwanyị gba ọtọ 19.
Ọ ga-ewe ụbọchị ole na ole maka foto ịbanye na saịtị ahụ.
Lezienụ anya na foto a chọrọ:
Tinye Mbụ, ederede na kọntaktị email (ọ bụrụ na ịchọrọ). Tinye kọntaktị email n'ime email ma ọ bụrụ na-amasị gị, MA Ọ BVERGH in na aha. Lee ihe omuma atu n’okpuru:
Aha: di na nwunye
Ederede: Anyị bụ di na nwunye si na ime obodo nke MG, enye 27 she 22. Anyị chọrọ ịgbanwe foto di na nwunye, anyị email: [email protected]
Agaghị edebanye aha ya na saịtị ọzọ;
Foto ndị ahụ ga-ezo ihu, enwere m nsogbu na ndị a matala na saịtị ahụ. Foto ndị na-egosi ihu Agaghị ebipụta!
Obere foto 10 na kachasị 20, ọ bụrụ na ịnwere karịa ịkewa ndị kachasị mma ma zipụ 1 email kwa izu na gallery ọ bụla na ederede ka ebipụta, ọ ka mma n'ụzọ a.
MBA kwesịrị ịdị obere (ihe na-erughị 500 × 500), nke ọma karịa 600 × 600 na ihe na-erughị 1024 × 1024. Ezigala foto na oke nha, wepụta ozugbo na igwefoto gị ma ọ bụ ekwentị gị. Ọ dị nwayọ maka izipu gị, maka m ịnata ya wee hazie ebe a tupu ibipụta ya;
Zipu foto di iche iche ka ha ghara iyi oke;
PGdị JPG, mgbe niile!
Foto ndị na-anaghị ezute ndụmọdụ ndị a nwedịrị ike ịdị ndụ, mana ọ ga-ewe ogologo oge ịdee na saịtị ahụ.
MBA Ezitela foto nke ụmụaka, onye ọ bụla zigara foto na-akwadoghị ga-enweta data na ozi ịntanetị ha n'aka ndị isi ruru eru!
N'ihe banyere vidiyo, ị nwekwara ike iziga ha site na email ma ọ bụ bugoo ha na RapidShare, FileSonic ma ọ bụ ọrụ ọzọ wee zitere anyị adreesị vidiyo na aha achọrọ.
Ziga na: [email protected]
Weebụsaịtị, Mgbasa ozi / Mgbasa ozi na veranda
Onsrụ Ọrụ: Fabio